4th June 2020, Thursday
काठमाडौं । यही फागुन १० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले फागुन २० बाट रिक्त हुने राष्ट्रियसभाको एक सदस्यमा उपाध्यक्ष वादेवलाई पठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि उत्पन्न तरंगले राजनीतिक बजारमा पार्टी फुट्नेसम्मका टिप्पणी र विश्लेषण सुरु भएका छन् । आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको सर्वसम्मत निर्णय पार्टी प्रवक्ताद्वारा सार्वजानिक भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमान्ने भन्दै सचिवालय सदस्यहरूलाई जानकारी गराएपछि नेकपाको भविष्यमाथि ती खालका टिप्पणी हुन अस्वाभाविक पनि थिएन । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा अडान र पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय अर्को भएपछि पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने बहस फेरि गर्माएको छ ।
तर, पार्टी एकताको यो २१ महिनाका बीचमा नेकपाभित्र आएको उतारचढाव यो नै पहिलो होइन । कुनै एक नेतालाई कर्नरमा पार्न कहिले को त कहिले को नेतासँग स्वार्थको समीकरण बनाएर समस्याको अस्थायी उपचार गरिँदै आएका थिए । यस्ता स्वार्थका समीकरणमा प्रायजसो वरिष्ठ नेता नेपाललाई कर्नरमा पारिँदै आएको थियो । नेपाललाई कर्नरमा पार्न पार्टीका विधि, विधानलाई समेत मिच्ने काम भए । जसका विरुद्ध नेपालले पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्ने माग गर्दै नोट अफ डिसेन्टसमेत लेखे । तर, नेतृत्वले ती विवादको समाधानका लागि दीर्घकालीन उपचार पद्धति खोजी गरेन न त नेपालको असहमतिप्रति कुनै चासो नै प्रकट ग¥यो । जसको परिणाम पछिल्लो समय तीनै मसिना समस्या बल्झेर ठूलो रूप लियो र पार्टीभित्र एक नेताविरुद्ध सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । पछिल्लो सबै उतारचढाव र घटनाक्रमहरूले दिएको एउटै सन्देश के हो भने नेकपामा अहिले प्रमुख तीन समूह छन् । ती समूहको नेतृत्व केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् । अर्थात् नेकपामा मुख्य तीन नेता छन् ओली, दाहाल र नेपाल । यी तीन नेताको सहमति, सहकार्यमा नै नेकपाको भविष्य निर्भर छ ।
पार्टी एकता भएको २१ महिना भइसके पनि अहिलेसम्म तलका कमिटीहरूको गठनदेखि लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म नै किन नहोस् पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूह भन्न छाडिएको छैन । स्वाभाविक नै हो, एकता प्रक्रियामा एउटा सिंगो पार्टीको नेतृत्व गरेर आएको हुनाले नेकपामा दाहाललाई अस्वीकार गरेर जाने स्थिति पक्कै पनि छैन । त्यसो गर्नु भनेको पार्टीलाई फेरि विभाजनतिर लैजानु नै हो । जहाँसम्म साबिक एमालेको कुरा छ, अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेपालको झन्डै बराबरको स्थिति हो । नवौं महाधिवेशनमा ५४ मतले ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । फरक त्यत्ति हो । त्यसपछि भएका जिल्ला अधिवेशनमा नेपाल समूहकै वर्चस्व हुँदै आयो । तर, यो बीचमा तीनैजना नेताको बराबरको यो अवस्थालाई नेतृत्वले बुझ्न सकेन । दुई नेता मिलौं, एकजनालाई त ह्याकुलाले पेलिहालिन्छ नि भन्ने गरी नजरअन्दाज गर्ने काम भयो । यति हँुदा पनि वरिष्ठ नेता नेपालको भूमिका कहिल्यै पनि नेतृत्वलाई चिढ्याउने, फटाउने खालको भएको पाइएन । राजनीतक रूपमा आफू पीडित भएर पनि पार्टी एकतामा खलल नपुगोस् भन्ने कुरामा नै बढी सचेत भएको देखियो । त्यसो नहँुदो हो त आफ्ना नोट अफ डिसेन्टका कुरा अस्तिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि राख्न सक्थे । तर, उनले एउटा परिस्थिति बन्यो भने ठिकै छ नि त भनेर संयम र लचकता देखाए । तर कुनै नेताको संयमलाई कमजोरी ठान्ने नेतृत्वको अर्को कमजोरी थियो ।
सबै नेताले सबैको महŒव बुझेकै हुनुपर्छ । बुझ्नुपर्छ । त्यसमा मात्र नेकपाको उज्ज्वल भविष्यको प्रतिबिम्ब देख्न सकिन्छ । नेकपाको भविष्य सुन्दर हुनु भनेको नेपालीको भविष्य सुन्दर हुनु हो, मुलुक समृद्ध बन्नु हो । किनभने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग जोडिएको छ ।
२० महिनापछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक
पार्टीभित्रै आलोचत आचारसंहिता
सभामुख सकस ; जग हसाउँदै नेकपा
काठमाडौं डाकेर किन अन्तै हान्निए प्रचण्ड ?
एमसिसी सम्झौतामा अनावश्यक बखेडा
ड्राइभिङ सिटमा प्रचण्ड ः नेकपाले लेला त गति ?
नेतृत्वको असफलतामाथि नेताको तीर
प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट
काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
रोकिएन हायातको मनपरी
काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै
काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...
बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत
काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
‘गीता’ को राजनीति
कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?
काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा
काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...